Sacuudiga oo xukun qoor goyn ku fuliyay nin Somali ah (Magaca iyo Sababta) – SHABAKADA HIIRAAN XOG
HomeWararka SoomaaliaSacuudiga oo xukun qoor goyn ku fuliyay nin Somali ah (Magaca iyo Sababta)
Sacuudiga oo xukun qoor goyn ku fuliyay nin Somali ah (Magaca iyo Sababta)
Sacuudiga ayaa xukun dil qoor goyn ah ku fuliyay Muwaadin Soomaaliyeed oo horey u dilay haweeney Soomaali ah.
Axmed Maxamed Xasan Cabdi ayaa lagu helay inuu si bareer ah u dilay marxuumad la oran jiray Farxiya Buulle Xasan sida uu qoray Wargeyska Al-riyadh ee ka soo baxa dalka Sacuudiga.
Gacan ku dhiiglaha la qisaasay ayaa dilka haweeneyda u adeegsaday toorey ka dib markii uu u dhacay Hoy ay ka daganeyd magaalada Jidah ee dalka Sacuudiga.
Dilka denbiilaha ayaa yimid kadib markii qoyska marxuumada ay boqortooyada Sacuudiga ka dalbadeen in loo qisaaso gacan ku dhiiglaha la qisaasay.
Maxkamad ku taalla Sacuudiga ayaa sheegtay in iyadoo la tixgalinaayo rabitaanka qoyska marxuumada la go’aansaday in xukun dil ah lagu fuliyo gacan ku dhiiglaha.
Daawo:Yaa ka nasiib badan xiligaan Oday si kadis ah looga bad baadshay wadada tariinka xili tariinka oo….